Instagram TV - မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်➡️➡️နောက်လိုက်များ▷➡️
Instagram ကိုတီဗီ: ကအလုပ်လုပ်တယ်ဘယ်လို
ဒီဇင်ဘာလတွင် 11, 20180မှတ်ချက်များ 1014
ဒါဟာလူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်အချိန်အများကြီးဖြုန်းမှန်သည်နှင့်, အထူးသဖြင့်, Instagram ကို likes ပေးခြင်း, မှတ်ချက် စာပမြေားအခြားလူများနေ့တိုင်းအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကို ... ဒါပေမဲ့ဒီသစ်ကိုလျှောက်လွှာနှင့်အတူမြင်လျှင် Instagram ကို TV က သေချာဖန်သားပြင်များ၏ရှေ့မှောက်၌ဤအချိန် ပို. ပင်တိုးပွားစေပါသည်။
Instagram ကို ဒါဟာအဆက်မပြတ်ယင်း၏အသုံးပြုသူများသည်များ၏တောင်းဆိုချက်အရသိရသည် updated သော social network ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒါကြောင့်မျှော်လင့်တာကပြုတော်မူပြီ။ နှင့်အနာဂတ်, အထူးသဖြင့်, ဗီဒီယိုနှင့်စမတ်ဖုန်းမှတဆင့်မြင်ကြသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, တီဗီ Instagram ကိုသို့မဟုတ် IGTV ဖန်တီးခဲ့သည်။ ဒါဟာဖြစ်ပါသည် အဘယ်သူ၏အခြေစိုက်စခန်းဗီဒီယိုနှင့်မိုဘိုင်းပေါ်တွင်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်လျှောက်လွှာ။
Instagram ကိုသို့မဟုတ် Instagram ကိုအဆိုပါဖြစ်ပါတယ်အသစ်လျှောက်လွှာပုံပြင်များပုံပြင်များခွဲခြားတစ်ခုမှာဒြပ်စင် အကြောင်းအရာ၏ကြာချိန်။ ယခုတွင်သင်သည်ပိုရှည်သောဗီဒီယိုများ upload တင်လို့ရပါတယ်။ အထူး တစ်နာရီမှတက်။ 24 နာရီဖြတ်သန်းရသောအခါထိုသူတို့ပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, shared ဖြစ်ကြောင်းဗီဒီယိုများလည်းဒေါင်လိုက် format နဲ့သာအပြည့်အဝကိုမျက်နှာပြင်မှတက်မရှိကြပေ။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်သင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ရှိသည် format နဲ့မှဿုံအဆင်ပြေအောင်နိုင်ပါသည်။
သို့သော်ထိုသို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, အဲဒီမှာကျွန်တော်ထပ်ဖြည့်တီဗီကြည့်နေကြကြောင်းပေါ်လာစေမည်တဲ့အင်္ဂါရပ်ကိုရပ်တန့်မထားဘူး။ ထိုအကြောင်း ဗီဒီယိုများလိုင်းများမှတစ်ဆင့်အလုပ်လုပ်ရန်သင်တို့သည်လှည့်ပတ်ကစားနှင့်လူမှုကွန်ယက်ကျနော်တို့ကိုပိုပြီးကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ကြောင်း Instagram ကိုအကြောင်းအရာထဲသို့သွင်းထားရန်စတင်ပါ။ သငျသညျအကွောငျးကိုပိုမို Instagram ကို Analytics မှ.
သူတို့ကအစသင်ပိတ်ဖို့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာခဲ့ကြသည်ရှိရာဒုတိယကွန်ကရစ်ကြည့်ရှုဆက်လက်ရွေးချယ်စရာရှိသည် လြှောကျလှာ အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်။ သငျသညျ, တယောက်ကိုတယောက်ရုပ်သံလိုင်းကနေအကူးအပြောင်းလုပ်ဆောင်ရှာဖွေမှုများကိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ချန်နယ်ဖန်တီးထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဤအင်္ဂါရပ်ကပိုကလူရောက်ရှိဖို့ကိုညွှန်ပြနိုင်ပါ။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်နိုင်ပါတယ် Instagram ကိုနောက်လိုက်ကိုဝယ် စပိန်အတွက်အင်တာနက်ပေါ်ရှိရရှိနိုင်ပါနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်သို့မဟုတ်ပေးဆောင်နိုင် applications များအမျိုးမျိုးမှကျေးဇူးတင်စကား။
တီဗီများအတွက် Instagram ကိုအကောင်းဆုံး
သို့သျောလညျး, IGTV နှင့်အတူသင်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောနှင့်အသစ်သောပရိသတ်ကိုရောက်ရှိရန်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။ ၎င်းသည်နောက်လိုက်အသစ်များလည်းရရှိနိုင်သည်။ Instagram TV မှတစ်ဆင့်ရရှိသောအောင်မြင်မှုများရရှိရန်အတွက်အချို့သောရှုထောင့်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
A ကောင်းဆုံး option တစ်ခုဖြစ်သည် mini ကိုအမြည်း Instagram ကိုဇာတ်လမ်းများပေါ်မှာငါတို့နောက်ဆုံးသောဗီဒီယိုလုပ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့များ၏အာရုံကိုခေါ်ခြင်း နောက်လိုက်။ ဤရွေ့ကားမြင်ရဖို့လိုသူမည်သူမဆိုများအတွက်စစ်မှန်သောဗီဒီယိုကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မယ့်လင့်ခ်များပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ကမြင်တွေ့စေရန်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုများ၏အရေအတွက်ကိုတိုးလို့ရပါတယ်။ စဉ်းစားရန်နောက်ထပ်ရှုထောင့်ကဗီဒီယိုအကြောင်းအရာသူ့ဟာသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအရေးကြီးဆုံးကတော့ကအစအဦးနှင့်မကြာရှည်ကြောင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
1 IGTV ၏အဓိကသော့ချက်များ
2 Instagram ကိုအပေါ်နောက်လိုက်
2.1 တီဗီများအတွက် Instagram ကိုအကောင်းဆုံး
ဒီဇင်ဘာလတွင် 11, 2018
မက္ကစီကို Instagram ကိုနောက်လိုက် Buy
အာဂျင်တီးနားအတွက် Instagram ကိုနောက်လိုက် Buy